Ungaya nini ukuya eCosta Rica | Izindaba Zokuhamba
Ungaya nini ukuya eCosta Rica
UMariela Carril | | Amathiphu, Costa Rica
I-Central America isiphenduke indawo enhle yokuvakasha kubo bonke abafuna ukuzwa imvelo, ulwandle namabhishi angcono kakhulu. Phakathi kwamazwe anezivakashi kunawo wonke Costa Rica, ipharadesi elingokwemvelo elivula iminyango yalo futhi elilindele izivakashi ezengeziwe ngemva kwale minyaka yobhadane.
Kodwa ... Ungaya nini ukuya e-Costa Rica?
2 Ungaya nini ukuya e-Costa Rica?
IRiphabhulikhi yaseCosta Rica iyindawo izwe likamongameli eliseCentral America, eyakhiwe izifundazwe eziyisikhombisa futhi ehlala abantu abangaba izigidi ezinhlanu noma ngaphezulu. UColumbus wafika lapha ngo-September 1502, ohambweni lwakhe lwesine, futhi ingcebo yegolide yezakhamuzi zakhona yamholela ekubeni akholelwe ukuthi izwe lalicebile ngempela. Ingenye yemibono yegama.
Ngezikhathi zamakoloni kwakuyi-a ukuncika kukaCaptaincy General waseGuatemala, ingxenye yeViceroyalty yaseNew Spain, wahlala kanjalo kwaze kwaba ngeyakhe ngo-September 15, 1821. Iqiniso liwukuthi umlando waleli zwe elincane laseLatin America ufana nowabanye omakhelwane balo: ubukoloniyali, ukuzimela, ukuncika e-United States, ubumpofu kanye nobumpofu obengeziwe lapho kusetshenziswa imodeli yezomnotho ye-neoliberal ehlala ithengiswe kahle enemiphumela eyinhlekelele. .
Costa Rica Ihlukaniswe izifundazwe eziyisikhombisa. Itholakala ku-isthmus ye-Central America futhi Inogu olwandle lweCaribbean kanye noLwandlekazi iPacific. Omakhelwane bayo yiNicaragua, iPanama ne-Ecuador kanye neColombia. Iqiniso liwukuthi yizwe inamagquma kakhulu, eneziqongo eziphakathi kwamamitha angu-900 no-1800 3820 ukuphakama futhi enengqikithi yezintaba ezine eziyinhloko nezinye eziseceleni. Inentaba ephakeme kunazo zonke kule ngxenye yezwekazi, igquma laseChirripó, elingamamitha angu-XNUMX ngaphezu kwezinga lolwandle.
Inezintaba-mlilo eziqhumayo kanye neziqhingi eziningi. OLwandle lweCaribbean kukhona i-Uvita Island neCalero Island, isibonelo, nasePacific iziqhingi zeqoqo leziqhingi zeGulf of Nicoya, iTortuga Island, Cocos Island, Caño Island nezinye eziningi. Ukwehlukahlukana kwayo okukhulu kwezemvelo kuyizuzele isikhundla samagugu omhlaba.
Ungaya nini ukuya e-Costa Rica?
Njengazo zonke izindawo zokuvakasha ubhubhane lwe-covid19 Kumthinte kakhulu. Uma ngaphambi kokuthi umuntu abhekisele emvuleni, ezixukwini noma ekushiseni lapho ehamba, namuhla akunakwenzeka ukugwema ubhubhane.
Uma kubhekwa lesi simo, izwe selizame ngangokunokwenzeka ukunciphisa ubungozi namacala futhi ngenxa yalesi sizathu selibeke uhlelo lwalo lwezempilo lwesimanje nolwamahhala ukusiza abahambi abafika ezweni lalo. Kusukela ngoNovemba 2020 zonke izivakashi zamazwe ngamazwe zingangena, ngakho lalivaliwe ngempela isikhathi esifushane kakhulu. Futhi-ke kwakungadingeki ukuvalelwa yedwa noma izivivinyo.
Ngakho-ke, kufanele uvakashele nini iCosta Rica? Isikhathi esidume kakhulu sokwenza lokhu yisikhathi samaholidi esiphezulu esiba ngoKhisimusi nangoNyaka Omusha. Kodwa kuhlale kungcono ukuyigwema kancane, ngakho-ke singasho ukuthi kungcono ukuhamba emasontweni ambalwa kamuva. Kukhona abantu abancane.
Inkathi yezimvula eCosta Rica iphela ngoDisemba kodwa amahlathi ahlala enomswakama kuze kube nguNcibijane, lapho amandla elanga eqeda ukuwomisa futhi ilanga likhanya emabhishi. Iqiniso liwukuthi lesi ngesinye sezikhathi ezingcono kakhulu zonyaka zokujabulela imvelo, njengoba izinhlobo zasezindaweni ezishisayo njengezinkawu namabheja zijoyina izinyoni ezifudukayo ezifika zivela enyakatho, imikhomo ezala emanzini afudumele kanye nezimfudu zasolwandle ezizozalela kuzo. ugu.
Kwabaningi isikhathi esingcono kakhulu akusona lesi, kodwa, kodwa ngoJulayi no-August. Kuyiqiniso ukuthi lina kakhulu kodwa kuba nezivakashi ezimbalwa namanani angcono. Futhi uma ungafuni iconsi lamanzi, noma kancane kakhulu, khona-ke kufanele ungene isikhathi esomile eCaribbean siphakathi kukaSepthemba no-Okthoba.
Njengoba kungenzeka usubonile, asikho isikhathi esibi sokuvakashela eCosta Rica naseqinisweni konke kuncike kulokho ofuna ukukwenza nezinto eziza kuqala kuwe. Uma unesikhathi phakathi nonyaka ungakhetha izikhathi ezingcono. Vele ukhethe inyanga bese ubona ukuthi isimo sezulu sinjani ngaleso sikhathi, ukuthi lina kangakanani, yiziphi izilwane ezifudukayo ongazibona nokuthi impilo yansuku zonke yezwe injani (imikhosi, amaholide, njll.).
Kodwa sinini isimo sezulu esingcono kakhulu? Kuya ngendawo esikhuluma ngayo. Iqiniso liwukuthi I-Costa Rica ine-microclimates ezimbalwa kanti nakuba enye ingase ibe nezikhukhula, enye ingase yome kuneSahara. Ngokuvamile, kukhethwa ukuhamba ngenkathi yezimvula ezimbalwa noma okuthiwa "inkathi eluhlaza" (kusukela ngoMeyi kuya kuNovemba). Kungaba ubusika ezweni: azikho ezokuvakasha, amanani aphansi futhi nakuba amamithambeka entaba angaba manzi. izinsuku libalele impela.
Noma kunjalo, lesi sikhathi sonyaka singase sibe nezinkinga zaso: ezinye izindawo zinomswakama ngempela, ikakhulukazi ingxenye ye-Atlantic kanye neningizimu-ntshonalanga nasenyakatho-ntshonalanga. I-Peninsula yase-Osa inemvula eningi futhi ukwazi ukuthi kuyinkimbinkimbi, ngaphezu kweqiniso lokuthi izindawo eziningi zokuhlala zivala ngoSepthemba no-Okthoba. Kungase futhi kube mnyama kancane njengoba ubusuku behlobo bude lapha, ngenxa yokuba seduze nenkabazwe. Uma kuwena iCosta Rica ifana nelanga kuzomele uhambe ngoJanuwari, February noMarch.
Ohlangothini lwasePacific, uma sikhuluma ngenkathi yemvula nesomiso, sikhuluma kakhulu ngeNicoya, eGuanacaste, enyakatho-ntshonalanga yezwe. Lonke ugu lwasePacific lunezintaba futhi lulandela amaphethini avamile emvula. Manje, ngasohlangothini lweCaribbean, empumalanga, kunokuhlukahluka okunamandla kwesimo sezulu kuye ngesizini futhi kuthanda ukuna unyaka wonke. Lo mthetho uphulwa ngoSepthemba no-Okthoba, inani lapho izwe lonke linemvula eningi, amabhishi aseCaribbean ahlala omile, enelanga futhi efudumele.
Izinkathi zezivakashi eziphakeme neziphansi zilandela amaphethini emvula ngasohlangothini lwePacific, okuyindawo lapho izindawo zokungcebeleka zikhona. Isikhathi esomile esiqala ngoJanuwari kuya kuNdasa siyafana nabantu kanye namanani abizayo futhi inkathi ephakeme ngempela amasonto amabili kusukela ngaphambi kukaKhisimusi kuya ngemva New Years.
Into engcono kakhulu mayelana nenkathi ephezulu ngokungangabazeki isimo sezulu, kodwa hhayi amanani. Kunzima ukubhukha, abantu baningi futhi emabhishi kunezinkumbi zabantu. Cabanga ukuthi bonke abantu basenyakatho nenkabazwe balapho bebalekela amakhaza amakhulu neqhwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Costa Rica » Ungaya nini ukuya eCosta Rica